မေတ္တာခမ်းနေသော ကမ္ဘာကြီး – Tameelay
တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်က တစ်ကောင်ကိုသတ်ဖြတ်နေရင်ဝင်ကူဖို့ ထက် ဓာတ်ပုံရိုက်တင်ဖို့ လောက်သာ ကြိုးစားနေတဲ့ လူတွေနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီး…
လူတဦးနဲ့ တဦး ရန်ဖြစ်နေရင်ုဖြန်ဖြေဖို့ ထက် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး fb တင်ဖို့ လောက်သာ ကြိုးစားနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီး…
အရှင်လတ်လတ်စားမှ ကျမ္မာရေးနဲ့ ညီညွတ်တာဆိုပြီး ဆိုင်တွေက အရှင်တွေကို စီစဉ်ပေးသလို စားတဲ့သူတွေကလည်း အဲဒါမျိုး ဆိုင်တွေကိုသာ သွားရောက်စားသောက်ကြတာဟာပါဏာတိပါတကံရဲ့ အကုသိုလ်ရော ကိုယ်ချင်းစာတရားပါ ပျောက်ကွယ်နေတာကို မသိကြတော့လည်း ကံတွေက သူ့ အလုပ်သူလုပ်နေကြပြီပေါ့။
အစုလိုက်အပြုံလိုက် သေတာတွေ မကြားဝံ့မနာသာ သတင်းတွေကြားရတာတွေ ကြီးကျယ်တဲ့သဘာဝတရားကြီးရဲ့ ဒဏ်ခတ်ခံရတာတွေအများကြီး ဖြစ်နေကြပြီပေါ့။
ဗုဒ္ဓက သတ္တဝါတွေဟာ သံသရာမှာ မလုပ်ဘူးတဲ့ ကုသိုလ်သာ ရှိမယ် မလုပ်ဘူးတဲ့ အကုသိုလ် မရှိဘူးလို့ ဟောထားပြီးသားပါ။အဲဒီလို အကုသိုလ်တွေဟာ ခုလို ကိုယ်ချင်းစာတရား ခေါင်းပါးတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဝင်ရောက်အကျိုးပေးတတ်တယ် လို့ လဲဟောထားပြီးသား….
အဲဒီလို အကျိုး အကြောင်း ရဲ့သဘောကိုတကမ္ဘာလူံးက လူတွေ နားလည်အောင်ပြောပြနိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေ ရှိနေပါလျှက်နဲ့ ယုံကြည်လက်ခံလောက်တဲ့ကံ နဲ့ဥာဏ် ပါမလာတော့လည်းထိုင်ကြည့်ပြီး သံဝေဂယူနေယုံကလွဲလို့ဘာမှမတတ်နိင်တော့ပါဘူးလေ…။
တိရစ်ဆာနျတဈကောငျက တဈကောငျကိုသတျဖွတျနရေငျဝငျကူဖို့ ထကျ ဓာတျပုံရိုကျတငျဖို့ လောကျသာ ကွိုးစားနတေဲ့ လူတှနေတေဲ့ ကမ်ဘာကွီး…
လူတဦးနဲ့ တဦး ရနျဖွဈနရေငျုဖွနျဖွဖေို့ ထကျ ဓာတျပုံရိုကျပွီး fb တငျဖို့ လောကျသာ ကွိုးစားနတေဲ့ ကမ်ဘာကွီး…
အရှငျလတျလတျစားမှ ကမ်ြမာရေးနဲ့ ညီညှတျတာဆိုပွီး ဆိုငျတှကေ အရှငျတှကေို စီစဉျပေးသလို စားတဲ့သူတှကေလညျး အဲဒါမြိုး ဆိုငျတှကေိုသာ သှားရောကျစားသောကျကွတာဟာပါဏာတိပါတကံရဲ့ အကုသိုလျရော ကိုယျခငျြးစာတရားပါ ပြောကျကှယျနတောကို မသိကွတော့လညျး ကံတှကေ သူ့ အလုပျသူလုပျနကွေပွီပေါ့။
အစုလိုကျအပွုံလိုကျ သတောတှေ မကွားဝံ့မနာသာ သတငျးတှကွေားရတာတှေ ကွီးကယျြတဲ့သဘာဝတရားကွီးရဲ့ ဒဏျခတျခံရတာတှအေမြားကွီး ဖွဈနကွေပွီပေါ့။
ဗုဒ်ဓက သတ်တဝါတှဟော သံသရာမှာ မလုပျဘူးတဲ့ ကုသိုလျသာ ရှိမယျ မလုပျဘူးတဲ့ အကုသိုလျ မရှိဘူးလို့ ဟောထားပွီးသားပါ။အဲဒီလို အကုသိုလျတှဟော ခုလို ကိုယျခငျြးစာတရား ခေါငျးပါးတဲ့အခြိနျမြိုးမှာ ဝငျရောကျအကြိုးပေးတတျတယျ လို့ လဲဟောထားပွီးသား….
အဲဒီလို အကြိုး အကွောငျး ရဲ့သဘောကိုတကမ်ဘာလူံးက လူတှေ နားလညျအောငျပွောပွနိုငျတဲ့ ဗုဒ်ဓရဲ့တရားတျောတှေ ရှိနပေါလြှကျနဲ့ ယုံကွညျလကျခံလောကျတဲ့ကံ နဲ့ဉာဏျ ပါမလာတော့လညျးထိုငျကွညျ့ပွီး သံဝဂေယူနယေုံကလှဲလို့ဘာမှမတတျနိငျတော့ပါဘူးလေ…။
ရခိုင်ရိုးမတောထဲတွင် ဗုဒ္ဓခြေတော်ရာတစုံ အား သစ်တောအဖွဲ့မှ တွေ့ရှိ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်လျင် မြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရာ ကို မဖြစ်မနေ share ပေးကြပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ရိုးမသစ်တောကြိုးဝိုင်း အတွင်း သစ်တောဧရိယာသစ် ပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရာ ဗုဒ္ဓခြေတော်ရာတစုံအား ရှာဖွေတွေ့ရှိသဖြင့် သမိုင်းပညာရှင်များကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ရာ ဘုရားရှင်၏ခြေတော်ရာအစစ် ဖြစ်ကြောင်း ပညာရှင်များက သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ နိုင်ငံတကာမှသမိုင်းပညာရှင်များ လာရောက်လေ့လာခဲ့ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ …
“ရွှေဥမင်ဆရာတော်၏ ဝိပဿနာ ရှုနည်း”
“ရွှေဥမင်ဆရာတော်၏ ဝိပဿနာ ရှုနည်း” သတိကလေး ထားနေရုံပဲ။ စိတ်ကို အတင်းထိန်းလည်း မထားနဲ့၊ တောင့်လည်း မထားနဲ့၊ ချုပ်မထားနဲ့၊ အလိုက်သင့် အလျားသင့် ကလေးနေပြီး ဖြစ်တာကို ဖြစ်တဲ့အတိုင်း သိနေရုံပဲ။ သူ့သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်နေတာကို သတိကလေး ထားနေရုံပဲ၊ ပေါ်အောင်လည်း မလုပ်နဲ့၊ ပျောက်အောင်လည်း မလုပ်နဲ့။ …
“ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်တဆူရဲ့မျက်နှာတော်က မျက်ရည်လို စီးကြောင်းကျဆင်း”
ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်တဆူရဲ့မျက်နှာတော်က မျက်ရည်လို စီးကြောင်းကျဆင်း” မနေ့ ည ၁၀နာရီက ထိုင်းနိုင်ငံ အယုဒ္ဒယ Ayutthaya မြို့ က နံမည်ကြီး ဖရကဲဝို ဘုရားကျောင်းဆောင် မီးလောင်ခဲ့ပါတယ်။ သွယ်ထားတဲ့လျက်စစ်လိုင်းဝိုင်ယာလျော့ဖြစ်လောင်တာလို့သိရပါတယ်။ မီးငြိမ်းသတ်အပြီးမှာ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်တဆု ရဲ့ မျက်နှာတော်က မျက်ရည်လို စီးကြောင်း …